Kurima gadheni uye DIY
kudzidziswa >> Gardening
Isu tinofarira Kurima gadheni uye senge mune chero chiitiko, DIY iripo. With DIY mune gadheni isu tinoreva magwara uye zvidzidzo zve gadzira maturusi uye zvinhu zvebindu redu.
Chatinoda ndechekuti kana iwe uine zano rebindu rako, kubva pakudiridzira otomatiki kusvika pakuvakwa kwegaba remaruva, greenhouse kana chishandiso chekudyara mbeu, usatarise kwaunogona kutenga asi tarisa apa ufunge ungazviita sei iwe pachako.
Kupisa gumbeze kumeresa mbeu
Ndiri kushandisa kudziyisa gumbeze kumeresa mbeu. Iri gumbeze remagetsi (rinopisa) rinosimudza tembiricha yevhu neinenge 10ºC uye rinomhanyisa kuberekwa kwembeu uye kutemwa kwemidzi yemichero. Ndakawana mhedzisiro yakanaka chaizvo nembeu dze Habañero mhiripiri. Kuita kuti zvikure mumazuva masere chete
Kune akasiyana mamodheru, kuwedzera kune saizi ivo vanosiyana nesimba. Iko kune ayo e17,5W ayo anowanzo simudza ambient tembiricha ne10% uye iwo e40,5W ayo anomuka pakati pegumi kusvika makumi maviri madhigirii. Paunoisa mukushandisa unofanirwa kumirira ingangoita maminetsi makumi maviri kusvika yapisa kusvika patembiricha yekupedzisira. Ivo vanoshanda kwazvo mushe kune zvishuwo kana kufambisa mbesa. Gore rino senguva dzose ndanonoka kudyara zvinhu, asi hei. Ndatove negumbeze regore rinouya. ndine akatenga izvi.
Kunyangwe iwe uchida kuti zvinhu zvese zvinyatsodzorwa unogona kuisa thermostat seizvi, kana kugadzira imwe yakavakirwa paArduino uye relay (icho chirongwa chandakamirira).